August | 2017 | Somaliland Hargeisa City
Madaxtooyada Somaliland Oo Xaqiijisay in Madaxeeynaha Qaliin Fudud Lagu Sameeyay
22 August, 2017 — somaliland1991
Wadooyin cusub oo caasimadda Somaliland ee Hargeysa laga hirgaliyey
Muj: Axmed Jaamac Saban ( Janan Oogo) W/Q Suleymaan Yusuf Dhakhtar
21 August, 2017 — somaliland1991
den 17 november 2016 ·
Muj: Axmed Jaamac Saban ( Janan Oogo).
Sawirkani waa Muj.Axmed Jaamac Sabban, oo ku magac dheeraa “Janan Oogo”. Wuxuu ka mid ahaa saraakiishii waaweyneyd ee SNM. kuna shahiiday dagaaladii.
Muj. Axmed Jaamac Saban, wuxuu ku dhashay magaalada Hargeysa 1954-kii, wuxuuna waxbarashadisii hoose ku soo qaatay dugsiga Shiikh Bashii, waxbarashadii dugsiga sarena, dugsiga sare ee Faarax oomaar, Hargeysa. Markii danbena wuxuu ahaa saraakiishii Ruushka loo diray ee wax ku soo baratay, toddobatanaadkii.
Muj.Janan Oogo, markii danbe wuxuu ahaa saraakiishii waaweyneyd ee ka dhiidhiday xukunkii dooxatada,wuxuuna ku biiray ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaliyeed ee SNM.
Mujaahid Janan Oogo, waxaa lagu xasuusta goobo baddan oo dagaal, kii ugu danbeeyey”se ee uu noloshiisa ku waayey waxay ahayd 1988-kii, markii ciidamadii SNM, Burco galeen, oo dagaal xoogani ku socdo,gurmad baddana meel walba ciidankii Soomaaliya ka soo gaadhayo, ayaa Muj. Janan Oogo iyo saraakiil kale oo baddan waxay go’aan sadeen inay gurmadka Hargeysa ka baxaaya joojiyaan, isla markaana ay burburiyaan ciidamadii Dawladda ee fadhiyay cadaadley iyo nawaaxigeeda.
Galabnimadii 28.May.1988, ayaa saddex guuto oo kala ahaa, Sayid Cali, Barkhad iyo Sh.Sancaani, waxay usoo dhaqaaqeen inay cadawgii fadhiyay Cadaadley iyo nawaaxigeeda baabi’iyaan,
saddexdan guuto, iyagoo aan dhaqaaq joogsi lahayn ayey ciidankii cadawga isa soo kortaageen, galabnimadii 29.May.1988-kii, waa jibkooduna wuxuu ahaa.
1. Sayid Cali inuu qabto taliska guutada 86-aad oo ugu adkayd uguna xooganayd
2. Barkhad inuu qabto taliska gaaska 12naad.
3. Sancaani inuu qabto ilaalada kowaad ee Cadaadley oo fadhigeedu ahaa Weeraarta.
Mujaahid Janan Oogo, wuxuu ahaa abaanduulihii guutada Sayid Cali, oo faqashtu aad uga cabsoon jirtay. Wuxuuna galabnimadii 29.May.1988-kii, saacadu markay ahayd 05:30pm, Uu xabadii ugu horeysey ku riday, taliskii guutada 86-aad. Waxaana halkaas ka bilowday dagaal aan waxba la’iskula hadhin, waxayse guusho muddo 30 daqiiqo aan ka badnayn, ku raacday, guutadii Sayid Cali, waxayna si xarago leh ula wareegeen, taliskii 86-aad ee ciidanka faqashta.
Waxaase soddonkaas daqiiqo ku shahiiday, abaanduulihii guutada Sayid Cali, Muj. Axmed Jaamac Saban, “Janan Oogo” oo ciidadamada hor kacaayey. iyo afar mujaahid oo kale.
Si’loogu dayduu geesina u diriraa
Meesha ay dad ka maagaan
Usha weeye lagu dayo. Abwan Ibrahim Gadhle.
Mujaahidku xilkiisii waa gutay, illahayna janatal farduusa haku abaal mariyo, waxaase wanaagsan isaga iyo mujaahidiintii kaleba inaan la ilaawin ee la xasuus naado, goobo muhiima oo magacyadoodu ku waaraana, loogu magac daro.
Waa dhaqan waddani! Abwaan Adan Tarabi.
Dhimasho xaq ah, oo ta ugu saraysa ee shahiidnimada ah, ayay shahiideen, Mujaahidiintii SNM.
W/Q Sulemaan Yususf Dhakhtar
Taariikhda caasimadda Jamhuuriyada Somaliland ee Hargeysa W/Q AHMED RASHEED
19 August, 2017 — somaliland1991
Published by Waaheen Media on September 26, 2014 | Comments Off on Hargeysa
Hargeysa (Af-Ingiriis: Hargeisa, Af-Carabi:هرجيسا, waa magaalada labaad ee ugu weyn Wixi La Isku Odhan Jiray Soomaaliya, Hargeisa Waa Casimada Dalka Ka Go,ay Soomaaliya Walow Aan Wali La Aqoonsan Lakin Wuxu Lahaa sadex iyo Labadanki Sano Ee Uu Danbeyay Mamul Ka Madax Banan Ka Muqdisho .
Hargeisa Waxay Caan Ku Tahay Oo Dalxiis Logu Imada Buurta Laas Geel Oo Ay Ku Sawiran Yihin Ansaar Ama Farshaxan Kas Oo Ay Ka Muuqdan Dhaqanka Dadka Afsomaliga Ku Hadla Oo Ah Reer Guura Iyo Xoolo Dhaqto Magalada Hargaysa Waxay Kale Oo Ay Caan Ku Tahay Taalada Guumaystihi Ingiriska Iyo Taalada Kale Oo Ah Macankagi Kaliya Taliya Ahaa Ee Siyad Bare Taas Oo Ah Diyarad Si Xasuus Leh Loogu Xardhay Bartamaha Magalada Hargeisa
Hargaysa Waxay Ahayd Meel Ay Dhirtu Ku Badan Tahay Waxayna Ahayd Meel Bahalo Galeen Ah Sida Tariikhada Ku Cad Waxa Magalada Asasay Culimo Awdiin Kas Oo Ka Dhisay Masajid Iyo Meelo Digriga Iyo Quranka Lagu Barto Tas Oo Sahashay Inay Imaad Oo Ay Soo Dagan Dad Badan Madama Somalidu Dinta Jeceshahay
Bilowgii Degitaanka Hargaysa
Hargaysa waxay ahayd goob ay ku badan tahay dhirta isku cufanka ah oo ahaa kaymo jiq ah, taasi waxay keentay in dadkii degi jiray oo xilligaas ahaa dad reer guuraa ah inay ka firxadaan saddex shay oo ay Hargaysi caan ku ahayd wakhtigaas oo kala ahaa:
1.Masas sun halis ah lahaa oo ay hoy u ahayd dhirtan isku cufanka ahayd.
2.Libaaxyo raxanraxan ahaa oo dad iyo duunyaba cuni jiray
3.Kaneeco aad u farabadan oo gabood ka dhigan jirtay dhirta isku dhafanka ee goobtani caanka ku ahayd.
Saddexdaas arimood ee ay nu soo xusnay waxay halis weyn ku ahaayeen dadkii iyo xoolihiis goobtaas ka ag dhaawaa, iyadoo ay taasi jirtay dadka reer guuraaga ahaa ama xoolo dhaqatada ahaa waxay kala dhici jireen xoolaha gaar ahaana geela.
waxaana goobtaan Hargaysi ku taalo ka jirtay dagaalo ka dhexeeyey qaabiilooyinkii dagi jiray Hargaysa gaar ahaana waxay isku layn jireen reer oogo iyo reer Guban ama reer waqooyi. Sida aynu soo sheegnay Hargaysi waxay ahayd goob cidlo ah oo dagaalada ka dhexeeya qabiilooyinka degi jiray agagaarka Hargaysa, waxaan intaasi sii dheeraa dhaca loo gaysto safarada iskaga goosha Berbera iyo Harar (Itoobiya) oo dadka safarka ah aad loogu dhibay.
Intaasi ka dib waxaa shiray culimadii joogtay Harar oo ka damqaday dagaallada iyo safarka dhibta lagu hayo ee ka jira Hargaysa. Waxay soo direen Sheekh Madar Ahmed Shirwac (AHN) si uu usoo afjaro colaada ka jirta Hargaysa oo meel aan la daganayn ahayd ama goob dhirtu meel kasta qarisay.
Sheekh Madar oo ahaa aasaasihii Magaalada Hargaysa wuxuu soo gaadhay Hargaysa sanadkii 1860kii badhtamihiisii isaga iyo koox culimo ah oo la socotay waxay yimaadeen dooxa Hargaysa oo dhirta ka baxdaa aad iyo aad u farabadan tahay haddii indha faraha lagaa galinayo aanad arkay, waxay madow ka qabto.
Sheekh Madar oo ahaa qofkii ugu horeeyey ee dega Hargaysa ayaa waysadiisii dalooliyay dalool yar markaasuu ku yidhi culimadii lasocotay “halkan oo dooxa Hargaysa ah ayaynu Ilaahay ku talo saaranaynaa inuu inoo dooro inaynu degno” Intaasi ka dibna biyihii waysada ee daldaloolka yar ayuu ku shushubay dooxii Hargaysa ilaa ay ka dhamaatay biyihii. Culimadii oo in muddo ah deganayd goobtan waxay xamili kari wayday kaneecadii, masaskii iyo Libaaxyadii ay goobtani ama dooxani caanka ku ahaa. Waxaa dhacday in ninkii ahaa mu’adinka oo masaajidkii ka eedaan islaahaa uu libaax cunay u sii hor fadhiistay Salaadii subaxa wadada.
Ka dib Sheekh Madar (AHN) iyo culimadii la socotay waxay u guureen meesha imika la yidhaahdo dabada cadaada oo ay in muddo ah ay daganaaayeen xiligaas wuxuuu ahaa gu’ roobab mahiigaan ahi ay ka da’ayeen Hargaysa waxay sababtay in meeshan la yidhaah dabada cadaada ay ka dhalatay kaneeco farabadan taasina ay markale dhib weyn u keentay jameecadii ama culimadiii degtay.
Ka dib waxay usoo guureen taiga yare e xaafada loo yaqaano jameeco wayn manta oo kaneecadu ku yarayd. Taasina waxay inoo cadaynaysaa in xaafadii ugu horaysay ee Hargeysa la dego ay ahayd xaafada Jameecada goobta uu masaajidka jameecadau ku yaallo. Sida magaca jameecada laga dhisan karo waa eeray carabi ah oo micnaheedu yahay dadka isku soo ururay ama koox culimo ah, waxaana Sheikh Madar (AHN) iyo culimadiisii la socotay ee meeshaasi degtay loogu magac daray.
Mar haddii la damcay in Hargaysa si joogta ah loo dago, waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo cunto iyo hooygii lagu noolaan lahaa, wuxuuna sheikh Madar ku guubaabiyey culimadii joogtay in dhulka la tabcado, si cunto looga soo saaro, isla markaana la sameeyo beero lagu beero hadhuudhka.
Waxaa kale oo intaasi ku daray oo uu ka codsaday beesha ku xeel dheer bir tumista inay soo diyaariyaan boqol gudmood oo dhirta cufan lagu jarjaro. Waxaa intaasi xigtay in jameeco weyn laga sameeyo dhul banana oo ood lagu soo wareejiyey lagana dhigo masaajid lagu tukado diintana lagu barto.
Tallabadii taasi xitay waxay ahayd in la dhiso guryo ay culimadu ku hoyoto ama ay seexdaan, waxana la bilaabay in la dhiso aqal soomaali oo xilligaasi ahaa waxa la dhisto oo u sahli karaayey in si dhib yar loo guuro.
Haweenka oo xilligaasi ahaa aqoonyahano ku xeel dheer xirfada lagu dhiso aqal soomaliga ayaa kaalin libaax leh ka qaatay dhismaha guryahaan.
Sanadkii 1870kii oo ahaa xilligii uu maamulka Turkigu ka talin jiray Somaliland, waxay jameecadu yeelatay ciidan ku hubaysan qoryo uu siiyey maamulkii cusmaaniyiintu. Hubkaasi may haysan dadkii reer guuraaga ahaa ee degi jriay Hargaysa agagaarkeeda. In muddo ka dib, waxaa muuqatay in masaajidkii ooda ahaa uu dadkii qaadi waayo oo loo baahday in la balaadhiyo, waxaan lagama maarmaan noqotay in dargad weyn laga sameeyo goobta masaajidku ku yaalay. Waa masaajidkii imika la yidhaahdo jameeco weyn.
Dawlada maser ee wakiilka uga ahayd dawaladii cusmaaniyiinta ee ka talin jirtay geeska Africa ayaa waxa kaxaysay dad soo barta xirafada dhsimaha guryaha dhagaxa ah loo dhsio waxaa ka mid ahaa Cabdilahi maxamud Hiraab.
Sanadkii 1883 ayaa masaajidkii jameecada loo beddalay dhagax ama daar lana dhamaystiray. Waxaa kale oo laynoo soo tebiyey in tafsiirka Quraanka si jooto ah loogu baran jiray masajidka Jameeco weyn, halkaasina waxa inoo cadaatay in gurigii ugu horeeyey ama dhismihii ugu horeeyey ee dhagax laga dhiso Hargaysa uu aha Masaajidka Jameeco wayn sanadkii 1883.
Wixii intaasi ka danbeyey Hargaysi waxay noqotay goob ganacsi oo lagu iibiyo alaaboyinka ay ka midka ahaayeen: timirta, bariiksa, buuriga i.w.m. Gurigii labaadna ee loogu hordhisay wuxuu ahaa guriga imika ku yaala qudbiga sheikh Madar (AHN) ee xaafada Sheekh Madar ku yaala oo la dhisay 1895,
markii hore gurigan waxaa iska lahaa nin maalqabeen ahaa oo u dhashay dalka Ingiriiska isago ugaaddhsanaya ayuu Libaax dhaawac halis ah u gaystay ka dibna waxaa daaweeyey sheikh Madar, markaasuu isna gurigiisii ku wareejiyey. Markii uu sheikh Madar (AHN) Hargaysa bilaabay may jirin wax biyo ah oo laga cabo, waxaana laga soo dhaamin jiray ceelka Xaraf ku yaala iyto ceelka Dhogor (Aw-barkhadle).
Waxaa xusid Muddan in aanu xilligaasi jirin maamul ama dawlad u talisa reer guuraaga oo ay u hogaansamaan, oo aan ka ahayn xooga qabiilnimo, qof waliba wuxuu sitay waran iyo gaashaan oo xilligaasi ahaa hubka ugu xoogan iyagoo halhays ka dhigan jiray maahmaahada soomaaliyeed “Dagaal gondahaaguu ka dhashaa.”
Muddo ka bacdi sheikh Madar (AHN) wuxu Hargaysa ka sameeyey maamul aan ku salaysnayn qabiil kaliya, balse ka kooban qabiilooyin kala duwan oo ka tirsanaa Jameecada, Islama markaana lagu maamulo Kitaabka quraanka kariimka ah iyo sunaha rasuulka (CSW). Sheekh Madar wuxu haystay ama aaminsanaa dariiqada qaadiryada maca jameecadiisa.
Sheek Madar wuxuu nabad waarta ka dhaliyey Hargaysa iyo agagaarkeeda sida uu yidhi qoraaga caanka ah ee F.M. Lewis “Hargaysa waxay ahayd janno nabad ah oo ay ku wareegsan yihiin reero dirirsani.” Waxaana weedha maanta loogu yeedho Somaliland.
magaalada hargaysa iyo xiligii halganka
dhibaatooyinkii ka dhacay 1982 – 1988
Waa Taariikh aan dib ugu egayno cadaadiskii lagu hayey reer Somaliland ee sababay in dagaal hubaysan lagala hortago taliskii Dhisnaa ee Dawladii Somaaliyeed Madaxweyne Maxamed siyaad bare. Alaha u naxariste
Lama soo koobi karo dhacdooyinkii Xanbaarsanaa DULMIKII , DILALKII iyoXASUUQII ka dhacay gobolada Somaliland 1980-1988 .. Haddii Aan Soo Qato . Magaalada Madaxda Hargeysa oo aan waqtikaas deganaan jiray / Bal aan wax Yar oo Taariikh ah iidiin ka sheegeeyo oo ka Faaideysta Xasuustan aan dib uu soo kocday .
Weli dad badan baan Fahmin Nabada iyo Dawlada Somaliland sidii ay ku Timi Wax loo baahan yahay In la Xasuusto Dadkii la Xasuuqay iyo Dadkii Shahiiday Bal aan Ceelkii SMN uu Arooro in ay Biyo ku jiraan Haddii loo baahdo dad weli Haraadan ay Jiraan 27 May1988 //Geedigii uu horeeyey waxay soo cagadhigteen SNM tu Magaalada BURCO ay ka EEDaameen Salaadii Subax kuna Tugadeen Xeradii Ciidamadii Balanbalay ee Taliskii Siyaad / aan soo koobee .,Farxadii labaad waxay ka Diyaantay Maalintii Sadexaad Caasimada Hargeysa oo aan markaas joogay kana mid ahaa Dib jirka magaalada Degnaan jiray . / Barikaas markii ay soo galeen
Magaalda Burco Mujaahidiintii SNM ay Ciidamadii Faqashtu ku riday Argagax iyo Caga Juleey Dadkii Degenaa Magaalada Hargeysa Maalintii Labaadna Dhamaan Odayaashii M/Har ayaa Jeelka loo Taxaabay iyo Wixii shicibka ahaa oo Wadooyinka ay ka helaan iyo 180 Askari oo laga soo ururiyey Ciidamada Xooga Dalka ee laga Shakiyey Beelaha Sh Isaaq //
Dadkaas oo Gaadhayey 1600-1800 waxa la kala geeyey Jeelasha Xerada Birjeex /Jeelka NNSTA /Jeelka Hangashta /Jeelka Xerada Duub-Casta iyo Saldhiga Buliiska dadkaasi 95% waa la Xasuuqay waxana ka masuul ahaa Duubcastii Taliyaha Moorgan iyo GOra Jaan ,
iyo Kuwo Weli la doondoonayo /Nasiib Daro dadkaas iyaga oo Raxan Ran ah waxay ku Aaseen Laakta MALGA DURDURO ,,Biriijka LIIQLIIQATO hoostiisa / Garoonka Birjeex ka danbeeyey /iyo Doga Hareysa Culb / Gurika Martida (Rest House) dabadiisa iyo Fooqa Gani Agtiisa iyo Xerada NNSTA Duleedkeeda Ilaahay JNHK..DADKAAS .
Habeenkii ay soo galeen 31 May 1988 Mujaahidiintii SNM Magaalda Hargeysa 2.30 ayaa waxa Bilaamatay Codkii Hubka iyo Gariirkii ka soo HINRAAGAYEY Dhinaca Koonfur SW M/Hargeysa. .Habeenkaasi Cirka Aad buu Madobaa ,Neexow fiican iyo Daruuro ayaa Hadheeyey M/HAr ,
Ciidamadii faqashtu waxay Dhufeys ka qodanayeen Xeryohoodii , / Cirka waxa ka muuqday /25 Miles SQU NAbaalka ama RAska Signalka ah ee Hawada loo Tuuro oo ah 4 Nooc ah /SAHANKA (Bule Light ) /NABADA (White light /KHATARTA (RED light ) iyo GURMARKA (orange iyo red ) ay tuurayeen Baalo Xooftadii Ciidamadii Faqashtu ee Jaqayey DHiika Shicibka . waxa ka dhex -muuqaday Hubka lays weydaasanyey /Nasiib wanaaag 3.00 pm Codkii Hubka wuxuu soo dhowaadoba wuxuu soo Gaadhay Gurikii Fooqa Gaani uu Fadhiyo Taliyihii GAcan –Dhiilaha Moorgan .. (1 hr Later) Waxay ka qiiqday Xeradii Birjeex iyo Xeradii daraawiista iyo GAroonkii Xaafada GAANBO AMXAARO ///
Markii la gaadhay 5AM ayaanu ka soo degnay GURYIHII Dushood ee Magaalda Har aanu ka daawaneynay Arrintaas /6.00 Am ayaa Xabadihii istaageen waxanu araknay Qiiq dhul heehaabanaya dhamaan Xeryihii Askarta Joogtay /Dadkii oo yaaban Mucjisadan ilaa Xalay oo dhan socoday NAtiijadii ka soo baxday .
.Waxaan uu baanahay cid naga qancisa ////6.30-7 ayaa Sedeedii wiil ee ugu Horeeyey ku soo gudbeen Wadada Hargeysa Culb ka Timaada kuna Nasteen Gurikii SIxiroolihii Sh Bilise ee Dhaktarka ( General Hospital ) ka danbeeyey//
Farxadii Sedexaad ayaan ka qeyb galay .. Mushxaradii Sawaxankii iyo Salaamihii loo Hanbalyeeynay Jabhaddii SNM .. Aanu ku soo dhoweenay Gacmo furan Markii Ilaahay NAGA aqbal DUCDII .Habeenkaas /.9,00 am ayaanu mar labaad Arakay Inamadayadii SNM oo Raxan Raxan uu socoda Kuna Jeeni Qaaran Silsilado Rasaasi ka Buuxdo iyo Miinooyinka ay Gacanta ku sitaan
….DHabarka Waxay ku sitaan Kumucyadii BASUUKA ah iyo Sahaydoodii , Wiilashaasi waxay uu socodeen sidii Gow boyska oo Xadhiidhsan uu Horgacayo Nin Radiow Fooniya wata .iyagoo RaXAN Raxan oo socoda ayey ku faafeen Magaaladii (gurikii Martida (Rest House)
ila New Hargeysa aaga uu dhexeeya iyagoo marba meel uu siqaya ama uu Ruqaansanya Jiida hore , Dumarkii iyo Caruurtii baa daba Yaacayey iyaga oo Qaadaya Heeso aan ka sii Xasuusto (DHULKA SOW ANIGU MALEH ) eg Iyo Soo Dhowaada Geesiyadiyow soo Dhowada /Waxaan Xasuustay Maalintaas Siiradii NABI -MAXAMED CSW markii ay Furteen Axsaabtii Magaalda MAKA.Mukarama /.
aan soo koobee 3 Cisho ka dib 10..00 am Waxay Ciidamadii Naflacaariku ee Dawladda ka soo Galeen Wadada Air porka ka Timaada iyaga oo Walwaalaya .GAARAHA GURGUURTA ,BMKA ,Gasswaadhida Kaashaaman /MAdaaficda la jiidayo oo Xeryahoodii ku soo noqdeen intii Hadhay /
Haddan waxay Maqalan Hubka Culus oo ka dhacya Koonfur Magaalada Har ee Masalaha laysu adeegsaday Anti Air Garaaf iyo Madaafii uu Watay Gan ku Dhiilaha Col Goora Jaan Ciidankaas oo ahaa kuwii Kaydka Faqashta oo Jilbka uu digeen qeyb ka mid SNMta
oo ka waabiyey in ay soo galaan Magaalda Hargeysa , isla Markaas Waxa Duushay Diyaradii ugu horeeysay intay Magaalda Dulmartay bay Hadana Fadhiistay/ /waxay Samaacdo aad uu qeylinaya soo dhigeen BAR Hargeesa Hortiisa oo Qaadaysa Heeska (Samadiidow dabin baa xidhan lagu dilidoonee )
oo hore Degahayaga uga batatay // waxaan arkay gaadhi Jiib ah uu wato Sarkaal SNM ah iyo Sedex Mujaahid Meel uu nagaga yimi ma garaneyen laakiin Markii danbe lay sheegay in uu yahay Muj MUSe Biixi uu ku soo wareegay ila Dawlada Hoose ila kaalinta ina galan dabdeed Xaafada Xero OOR Dusheeda ayuu Istaag Gaadhikii SNM tu .
waxay uu Ruqaansadeen M/Snm Wadada Dhakhtark ee Jeeda Hore ilaa Daamkii Biyo Xidheenka New Hargeysa /Anigu Markaas waxan garab taagneen 10 kii wiil oo Fadhiistay Hoteelka TOGDHEEER ./Dabeed waxaan dareenay Intayadii HAwlaha ciidanka wax ka Yaqiin In lay Horfadhiistay (Face to Face )
/Waxa isku Xidhmay Commandkii Ciidanka Faqashta wax loo Qaybiyey Dadkii Taageersanaa XUKuumadii Siyaad Bare Qabiilada deganaa Magaalda Hargeysa VIA Reer SH Isaaq / ayaa Hubkii lagu Taxay .iyo Qoryo qof walba /
Markii aanu Sirtii Helanay waxaanu uu Tagnay Culimadii Diinta wax ka yiqiinay in ay Dadka Taageersan Muj SNM la Gaadhsiiyaan //DUCADII NABIGA CSW uu ku Duceystay DAgaalkii Ceelka BEDER ay is Horfadhiisteen Gaaladii /// Dadkii Magaalda Hargeysa ee REER SH ISAAQna Waxa iyaguna goosteen In aan layso Diibin Ciidamada Ay is garab Taagaan Mujaahidiinta SNM Sida uu Qorayeey Xeerka SNM HIIL iyo Hooba Sababtoo waa Tii Geentay Guulaha ugu Weyn eek u Fiday Gobolada Waqooyika / Maalintaas waxa Dumarkii iyo Ardaydii ayaa isla markiiba dhigay wadooyinka FOOSTOOYIN ,
DhAGxaan waa Weyn iyo Taayiro Gubanaya lagu xijaabay LAbada Wado ee IDaacada Tegijiray iyo Wada Bebera looga Baxo / Qacdii uu horeysayba waxa ooda soo Jabsaday Ciidan uu Watay NInkii Majeerteen Col Food Cade ee ka soo Sajeeray SSDF ay Banaanka Xeradii NNSTA horteeda ay wadheen Meedkiisii ciidankiina waa Jabeen Cidamadii uu watay waxay Galeen Xeradii HanGeshta ,
isla Maalintaas ila Afar Weerar ayey soo qaadeen Ciidamadii FAqshtu ilaa Afar Sarkaal oo Hagaaminey baa ku dhintay meed badan oo askar ah oo lebisan Tuutihii Ciidamada baan ku Arkay Jeelka Hortiisa Mid ka mid ahaa ayaan Jeebkiisa kala baxnay 500 US Dollr uu ka soo Bililiqaastay Bakhaaradii Down Townka M/ Harg ..
HAddaan intaas ku dhaafo 6 Cisho ka dib Weerar kii kasta marka ay ka Jabaan Ciidamadu // Aakhirkii 6-7 june 1988 .Ciidamadii Faqshtu Waxay Adeegsadeen Madaafda Rida dheer 85 ay la ku rusheeyeen Magaalda oo dhan Maalintaas Boqolaal Qof oo shicib ah ayaa ku Nafwaayey /Maalinti Labaada BMKII 38 -40 Gaadhi ee Xabaarsan mid kiiba 12 Dhuumood ah .
baa Dab Xidh ku Sameeyey M/Har 10am –ila 5PM ay hoos yaacayeen GAAraha iyo Beebeeku laga soo bilaabo( Rest House) ilaa New Hageysa Xafadda Agaagaar Beeraha doga uu dhow ,Xaafada Gudhac dheer ee daanta Dunbluq Wadooyinka oo dhan baa Meyd baa buuxyey
aan Tiro lagu soo Goobi Karin /Maalintii Sadexaad waxa qeyb ka qaatay 4 diyaarood oo soo galay weeraradii oo Magaalda iyo Agagaar keeda Roob kaga dhigay Laakiin Nasiib Wanaag Shcibka Magaalda Faraxd Weyn baa ka muuqatay Haddii aanu Mid ka Hadheeyn .// Bil iyo 20 Cisho maalin kasta 7am -6 Pm ayey Garaacayeen Madaafiida .BMKA iyo diyaadaha MIC 17 – 19 iyo BOMBAR oo ka Sameenayey 3 Tuulimaad Maalin kasta Magaalda Hargeysa iyo Nawaaxigeeda /Dagaalkii wuxuu gaadhay Door to door oo Fooda lays Daray Dhamaan Waxa la soo Afjaray Gurmadii uga Imanayey Ciidamada Faqashta Gobolada Kale iyo Degmooyinka waxa soo Jabay Ciidaaankii Faqashta oo Gabaleed deganaa Gabeelay ,Arabsiyo Saylac ,Dararweyne ,Masalaha ilaa jidahaas oo dhowdhow and etc
Wajigii labaad ee weerarkii Hargaysa
Waqtigaas Magaalda Har waxay Ciidamada Faqashtu uu qeybsameen laba Nooc .Qaar ku Wareeray BiliQadii oo Baxsaday iyo Qaar Commaankii ka lumay ilaa uu Daawicii DHaktarka DigFeer ee Magalada Xamar Dhakhtarka Madiina iyo Dhakhtarka Afisyoone Sariiro looga wayey //
Magaalda Xamar //dabadeed Ciidamadii Tuutaha Sitay waa laga dhigay Dereeskii oo dhar cad baa laga dhigay si ay uu Soo galaan Xeryaha Qaxootiga iyo Ciidamadii Dhafoor Qiiq ee Mjeerteen SSDF oo Xero Gooniya Diganaa Birjeex , Ciidamadii Daraawiishta iyo Buliiskiina waa layku daray Intii Hadhay oo xarun loga dhigay Saldhikii Buliiska Shicibkii Qaxootigana waxa Xun looga dhigay Xerada Dhaamka ,Xerada Adhi Cadeys ,iyo Saba Casad Xeryahaas waxa ka mid ahaa
XERADA AGABAR degmada Gabiilay
XERADA XEEDHO Degmada Hargeysa 6 Miles North M/Har
XERADA aAdhi Cadey Degmada Har 16 miles East ,
XERADA DAamka degmada magalada Hargeysa Xaafada Gacan Libaax
Xerada Sabo Xad East Hargeysa /
XErada BIXIN DUULA degmada Berbera 32 Miles South / iyo
Xerada Dila Degmada Boorama /
Dhamaantood waxa laga xukumi jiray Xafiiska Xerada GANAD EE Xaafada x-awr dusheeda Magaalada Hargeysa //Si aad uu Fahantaan Xeryada GAnad waa Xarunti Qaxootiga isla Markaas waxa deganaa Qaxooti Hubeeysan ee Laga soo raray Xerada Xeedho . waxay hoose Iman Jireen Shikhada madax Banaan oo la oran jiray RRS oo Xarunta aheed Xarunta Dhexdeeda iyo Taliska Guud Magaalda Xamar oo toos ugu Xidhnaa Madaxdooyada Somali iyo Beesha OGAADEEN oo Qandaas lagu Siiyey Mr Maslax iyo Dhamaan Qabiilada Hilika Shanaad Beelaha Degan . Mid kasta wakiil uu joogay Xeradaas Ganad marka laga reebo Beelaha Isaaq //
Xeryahaas oo dhan Waxaa ka diiwaan ka shanaa 4 Million 500,000 Qof oo Been ah marka layku daro Somalida Hilinka Shaan iyo OROMO Laakiin ay Tiradaas Qaxootigka ah ay Aduunka ka qaadan jireen Lacag Tuugtii UNCR ee Fadhiyey Nayroobi / Xero kasta waxa Joogay Ciidan Gaar ah oo hubeeysan Laakiin aan direes Sidan //looma ogoleen in ay Cidi shoqo ka hesho dadka Magaalada Hargeysa iyo Reer Sh ISAAQ //
waxa iagyna Magaaldii ku hadhay Xerada Birjeex Dafoor qiiqi waxa ka diiwaan 5.000 oo been ah ay Adawladii Afweyne Mushar ka qaadan Jiray waxay ahayeen 50 -280 Nin oo Sakhraamin uu badnaa .waxa Magaaladii ku soo Hadhay Ciidanka Beelaha oo Ogaadeen oo la dejeey Xarunta ( Rest House )
Fooqkii Gaani waxa la dejiyey Taliskii Oromadii dhamaan Wixii reer Boorome joogayna waxay ii Tageen Dadkoodii Boorame , Waqtikaas Shicibkii Magaalada waxay ka dabaal degeynay Geed DAABLEEY .Dabeed waxa dhacay Weeradii uu danbeeyey Xaruntii Ganad uu Dagaal ka socoday 7ba Cisho oo aan loo Nasan /
Maalintaas SNMtii 70 Laad-kurusar .180 Gaadhi oo Isjiida ah iyo Raashinkii ayey Gacanta ku dhigeen In kastuu Dab sii Qabadsiiyeen markii laga Saaray Qaxootikii Hubeysanaa iyo Ciidamadii /Mudo ka dib Ilaa ay Soo Rideen Diyaaradii Fookorta ee Xamar-to Hargeysa Dawac iyo Sahayda soo Rari Jirtay Siina Rari Jirtay Waxayna Xidheen Wadadii GOBOLKA AWDAL ka timaada waxa Furmay Wada Socodkii Gobolada HARGEYSA ,BURCO iILa Gobolka Sanaag.
Could Somalia (Somaliland) Become New Gateway to Africa?
17 August, 2017 — somaliland1991
by Fredrick Ngugi, at 11:00 am, August 11, 2017, Business
Laas Geel Finding Somaliland’s ancient cave art is hard. Protecting it could be harder.
Taladii Talyanle Tebeyey , W/Q: Cali Cabdi Coomay
10 August, 2017 — somaliland1991
Thursday, August 10, 2017 11:33:46
Doodo kala duwan ayaa la gabtay, iyada oo distoorka Soomaalilaan la eegay, waxaan markiiba soo booday qoddobka 130-naad firqadiisa 4aad ee tilmaamay mudada
3/5/2002 ayuu madaxweyne Cigaal ‘AHN’ ku geeriyooday dalka Koonur afrika gaar ahaan magaalada Biritooriya dhakhtar ku yaalla. Markii warka geeridu uu soo gaadhay gudaha Soomaalilaan waxa ay dadku walaac ka qabeen waxa xigi doona iyo xalku uu ku dambayn doono dalku, iyaga oo qaarkood wadnaha farta ku hayey, oo xusuusnaa dhibaatooyinkii uu madaxweyne Cigaal dalka kala dabaashay. Shirar kala duwan oo lagu gorfeynayo xaalada dalka iyo waxa la yeelayo, dabadeed labadii gole-distoore ee Baarlamaanka iyo Guurtidu ayaa bilaabay ka arrinsiga xaalada.
Doodo kala duwan ayaa la gabtay, iyada oo distoorka Soomaalilaan la eegay, waxaan markiiba soo booday qoddobka 130-naad firqadiisa 4aad ee tilmaamay mudada kala guurka ah ee aan weli
xisbiyo lagu tartamin inuu xilka madaxweynenimo qabanaayo Guddoomiyaha Golaha Guurtida. Iyada oo uu distoorkii halkaasi taagan yahay, ayuu Guddoomiyihii Golaha Guurtida Sh. Ibraahin Sh. Yuusuf Sh. Madar’AHN’ go’aansaday inuu xilka madaxweynenimo u dhaariyo madaxweyne ku-xigeenkii Daahir Riyaale Kaahin, sidaasina uu Daahir Riyaale madaxweyne ku noqday, iyada oo distoorkii la baalmaray.
Dabadeed Sheekh Ibraahin ayey gurigiisii ugu tageen rag siyaasiyiin ahaa oo ay isku hayb yihiin, waxaanay ku yidhaaheen” Sheekh maxaad xilka madaxweynenimo u qaban weyday, ileyn adiga ayuu distoorku ku siinayaa inaad xilka qabato ‘e?” markaasuu Sheekh Ibraahin ugu jawaabay” waar ninkii Daahir Riyaale Kaahin ee aan xalay dhaariyey xilka madaxweynenimo saaka ku qabsan mayo ee I daaya, wax kasta ha ahaatee”.
Sidoo kale ayey haddana rag kale u tageen Sheekh Ibraahin oo ay kala hadleen isla arrintii, sidii kuwii hore oo kale ayuu u qanciyey, waxaanu ku yidhi” waar ma waxaad doonaysaan in la yidhaa kursiga Isaaq ayuun baa iska haysta, oo waa tii Siyaad Barre oo kale?, taasi ka dhicimayso dalkan, waxa aynu ummadda tusaynayaa in Soomaalilaan la wada leeyahay”.
Wixii faahfaahin ah ka eeg buugga” GO’AAN IYO GEESINNIMO ee ka hadlaya Sooyaalkii Sh. Ibraahin Sh. Yuusuf Sh. Madar”. Sidaasi oo kale xildhibaan Talyanle waxa ay ahayd inuu inuu eego xaalada taagan iyo mustaqbalka waxa soo socda, oo ku yidhaahdo kuwan dib u soo kiciyey” waar ninkii Baashe ee aan shalay hambalyeeyey, caawa ku qabsan maayo ee orda oo iga taga”.
Sidaasi ayey sharaftu ku jirtay, oo dalkana ka badbaadin lahayd buuq siyaasadeed. In dib wax loo eego dhib ma leh, balse wax ka sii qurux badnayn inuu dhaafto, si buuq looga baaqsado, oo uu danta dalka eego. Haddii ay doorshadani ku dhici lahayd bilaa buuq, waxa laga saadaalin lahaa in madatinimo ee soo socota iyadana si fiican loogu kala bixi lahaa.
Waxa la yidhi MEYD WAXA U DAMBEEYEY KAA LA SII SIDO, madaxweyne Siillaanyo wuxuu aqbalay in 80 cod lagaga helay oo wuu hambaleeyey, iyada oo madmadow badani ku jiray 80-kii cod ee lagaga helay.
Dhammaan go’aanadaasi waxa ay ina barayaan siday dalka buuq siyaasadeed uga baajiyeen ragaasi oo ay dib u liqeen damacoodii. Kaalintii Guddoomiye Cirro ayaa meesha iyana ka maqnayd, oo waxa la gudboonayd inuu yidhaa waxaanu haynaa inay 39 xildhibaan u codeeyeen Talyanle, balse qaranka Soomaalilaan ayaanu u tanaasulay oo qas iyo jahawareer siyaasadeed dalka gelin meyno. Balse isna taladaasi way seegtay. Siyaasiyiinta Soomaalilaan waa inay darsaan taariikhihii dadkii dalka soo maray iyo damacoodii siday u liqeen ee ay danta ummadda ugu hiilliyeen, si ay wax uga bartaan.
Kiniisadda Hargeysa yaa dhisay?
9 August, 2017 — somaliland1991
Waxa warbixintan innoo haya aqoon-yahan sarre waa Axmed Ibraahim Cawaale
Ahmed Ibrahim Awales foto.
warbixinta qaybta hore ee aqoon-yahn Ahmed Ibraahim Cawaale kaga hadlayo ammuurta ku saabsan Kiniisadda.
Ahmed Ibrahim Awale waxa dhisay French Roman Catholic Mission. Waa isla kuwii Berbera, kaddiba Dhaymoole ka dhisey mikinisadda dhammaadkii qarnigii 19aad.
Kaddib kacdoonkii Ina Cabdalle Xasan iyo dareenkii galey Soomaalida Ingiriisku dhowr jeer ayuu codsiga dhismaha mikinisadda ka oggolaan waayey (illen digo niman gelini muu guban e),
ugu dambayntii se waa oggolaadey. Ingiriiskuna waxa uu dhistey tii Barootestanka ee dhinaca bari ka saarnayd dhismaha Wasaaradda Maaliyadda.
Warbixinta qaybta 2 aad
Labada dhisme mid sida aad sheegtay dhagax ayuu ka samaysan yahay, ta labaad oo hadda burbur ah, kana dhex dhisan deyrka dhinaca bari kaga dhegsan Wasaaradda Maaliyadda, oo hore uga koobnaa dhismihii mikinisadda iyo guri yar oo wadaadku ku jiri jiray,
waxa laga sameeyey leben dusha lagaga talbiisay nuurad. Dagaalkii 1988 kaddib jiingadda ayaa laga goostey, kaddibna lebenkii ayaa maydhmey. Sidii ayey burbur u tahay
Tan dambe 1984kii waxa dib u habayn ku sameeyey gaal la odhon jiray Siegfrid Koch, lana baxay “Farxaan” oo ahaa ninkii hay’addiisu dhistey Xarunta Agoomaha ee Hargeisa. Sida aan meel kale ku sheegayna waxa labada kala dhisey a) French Roman Catholic Mission, iyo b) Ingiriiska.
FG: Tan dambe ee buuqu ka dhacey waxa 1996kii dayactir ku sameeyey nin Soomali ah oo Masiixi ahaa, oo la odhon jirey Fidel Gregory, Soomaaliduna u taqaannay Fideel Gidhi gidhi una joogay hay’adda Caritas.
Xigasho: Axmed Ibraahim Cawaale
den 1 augusti kl. 07:22 ·
Khawaajihii baa Yaabey!
Nin caddaan ah oo aannu faysbuugga jaal ku nahay oo ka yaabban tirada badan ee muuqaallada mikinisadeed ee maalmahan Soomaalida dhexdeeda ku wareegaya ayaa igula kaftamay sidan:.
Kuye, “Axmedow masiixiyaddii ma nas iyo nasiib baa uga soo dhex baxay dalkiinna, waa maxay dooddan socotaa?”
Markaan u faahfaahiyey sida ay wax u jiraan ayuu yidhi “Bilowgii, mikinisadahaas talo Soomaaliyeed laguma dhisan, se maanta kol haddii Soomaali dhexdeeda qaar u doodayaan in la furo, waa isla naskii aan sheegayey ee u soo baxay masiixiyadda!”
Golaha Wakiillada Somaliland waxa maanta hortaalla cuyuban taariikhi ah. Waxa la dooranayaa hoggaankii golaha; guddoomiyihii iyo ku xigeenkiisa muddo laba iyo toban sannadood ah ka dib markii uu jagada guddoomiyennimo ee golahaas banneeyey Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) (qore Maxamed Baashe)
6 August, 2017 — somaliland1991
Maxamed Baashe Xaaji Xasan har lagt till 3 nya foton.
13 tim · Hargeysa, Woqooyi Galbeed, Somalia ·
Golaha Wakiillada Somaliland waxa maanta hortaalla cuyuban taariikhi ah. Waxa la dooranayaa hoggaankii golaha; guddoomiyihii iyo ku xigeenkiisa muddo laba iyo toban sannadood ah ka dib markii uu jagada guddoomiyennimo ee golahaas banneeyey Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Waddani oo murrashaxiisa madaxweynennimona uu yahay.
77 ka mid ah xubnihii mudanayaasha golaha oo 82 ka koobnaa ayaa saaka oo Axad ah, August 6, 2017, lagu wadaa in ay golaha soo xaadiraan oo kala doortaan labada murrashax ee Baashe Maxamed Faarax oo ah guddoomiye ku xigeenkii golaha, laguna tiriyo xukuumadda ama xisbiga talada haya iyo Cabdiraxmaan Talyanle oo ka mid ah mucaaridka. Labada murrashaxba waxa ay ka oo jeedaan beelaha bariga Somaliland.
Xalayto ilaa subaxan saaka ah waxa socda loollanno iyo galangal xooggan oo labada dhinac ee tartamaya iyo docaha kale ugu jiraan dedaallo ay doonayaan in ay rabitaannadooda kaga dhabeeyaan.
Qolo kastaa iyada ayaa isu bogsan oo guusha isa siinaysa, lamana saadaalin karo cidda saacadaha soo socda libinta ku geeraari doonta, in kasta oo warar soo baxayaa tibaaxayaan in dhinaca mucaarid jeegaanta guushu u janjeedho, taasina keeni karto in doorashada xeel ahaan dib loo riixo, si muxaafidku isu abaabuli karaan.
Sooyaalka Golaha oo Dul-ka-xaadsi ah
Golaha Barlamaanka Somaliland waxa uu ka kooban yahay laba aqal. Aqalka sare oo ka kooban 82 mudana waxa loo yaqaan Golaha Gurtida oo xubnihiisa laga soo xulo beelaha qabaliga ah ee Somaliland iyo aqalka wakillada oo isna ka kooban 82 mudane oo ka yimaadda axsaabta siyaasadda, shacbiguna uu soo doorto.
1991 – 1993 waxa hawl galay mudanayaashii ugu horreeyey ee golaha wakiillada oo ka koobnaa 111 xubnood oo xulasho lagu keenay marxaladdii kala guurka ee SNM iyo nabadayntii beelaha Somaliland. Waxa golaha guddoomiyihii ugu horreeyey u noqday Ibraahim Maygaag Samatar, AHN.
1993 – 1997 waa geeddigii 2aad ee golaha wakiillada oo ku beegnaa xilligii yagleelka haykalka iyo hay’adaha dawladeed ee madaxweyne Maxamed Ibraahim Cigaal, AHN. Xilligaas waxa uu goluhu ka koobnaa 75 mudane, waxana guddoomiye u ahaa Axmed Cabdi Xaabsade.
1997 – 2005 oo uu goluhu ka koobnaa 82 xubnood waxa guddoomiye u ahaa Axmed Maxamed Aadan (Qaybe), AHN.
29 September 2005 – 02 August 2017 waxa golaha wakiillada guddoomiye u ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo hadda uun xilkaas banneeyey.
Golaha sharci dejinta ee wakiilladu intii uu jirey waxa uu ansixiyey 83 xeer oo muhiim qaranka jiritaankiisa u ah oo 52 xeer uu ansixiyey wixii ka dambeeyey September 2005.
Golaha wakiilladu waxa ay yeesheen xarun casri ah oo buuxinaysa baahidii xafiisyo shaqeed iyo shaqaale, qolalkii shirarka oo qalabaysan oo ay ka hawl galaan hadda 153 shaqaale tababaran oo tayo leh. Waxa uu goluhu leeyahay toban agaasime waaxeed iyo toban guddi hoosaad.
Laga soo bilaabo 2010, waxa uu goluhu ku guulaystey in uu joogteeyo daabacaadda buugaag gacan qabsiyo ah oo ka warrama sannad kasta waxqabadyadii golaha iyo warbixinnadii doodaha iyo hadal-qoraallada golaha ee kalfadhi kasta.
Waxa uu goluhu ka mid yahay foolaadka hay’adaha dawladda ee yeeshay mareeg golaha u gaar ah oo lagu kaydiyo xog si joogtaysan loo agaasimo oo kolba lagu daro wixii golaha ku soo kordha ee xog ah.
Arrintan kala doorashada labada mudane ee Reer Bariga ah waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dalku ku jiro xaalad kala guur oo doorashadii madaxtooyada la isu diyaarinayo, wada hadallo is afgarad guud laga gaadheyna u dhexeeyaan maamullada Somaliland iyo Khaatumo.
Dad badan oo siyaasadda undho indheeyaa waxa ay heeti-dhaqaaqan golaha wakiillada ka dhex ilmo roganaya ku suntayaan bilowgii tallaabo loo qaadayo dhinaca saami-qaybsiga iyo isu dheellitirka siyaasadda ee beelaha Somaliland iyo wax wada yeelashadooda, iyada oo intii Somaliland la yagleelayba tabashooyin xooggani ka imanayeen beelaha darafyada, gaar ahaan docda bari marka la eego saami-qaybsiga maskabyada waaweyn ee dawladda.
Xigasho: Maxamed Bashe
Posted in Uncategorized. Comments Off on Golaha Wakiillada Somaliland waxa maanta hortaalla cuyuban taariikhi ah. Waxa la dooranayaa hoggaankii golaha; guddoomiyihii iyo ku xigeenkiisa muddo laba iyo toban sannadood ah ka dib markii uu jagada guddoomiyennimo ee golahaas banneeyey Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) (qore Maxamed Baashe)
Golaha Baarlamanka Somaliland oo doortay Guddoomiye cusub 6 Ogos 2017
Golaha wakiillladda Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta doortay guddoomiye cusub.
Maanta oo ay tahay maalin axada, taariikhudna tahay 6 Ogos 2017
Waxaa ku looltamayey, labada musharax ee kala ah, guddoomiye ku xigeenkii hore oo maanta xilka iska casilay, si uu doorashada uga qayb galo, Baashe Maxamed Faarax iyo l iyo Cabdiraxmaan Talyanle oo labadooduba ka soo jeedaan bariga Somaliland.
Waxa ka soo xaadiray kooraamka aqalka golaha wakiillada Somaliland.
77 xildhibaan. Tirada guud ee xildhibaanada aqalka wakiillada Somaliland waa 82 xildhibaan.
Haddaba labaddii murashaxa ee ku tartamayey xilka qaranka ee golaha wakiillada Somaliland waxa midba la siiyey daqiiqadoo uu ku soo bandhigayo, haddii uu jagada guddoomiyenimo ku guulaysto waxa uu qaban doono.
Intaa ka dib waxa la gudo galay codbixintii. Waxaanay codbixintii u dhacday sida tan
1- Cabdiraxmaan Talyanle oo helay: 38 Cod
2- Baashe Maxamed Faarax oo helay 39 cod
Sidaa guushii waxa ay ku raacday Baashe Maxamed Faarax oo noqday guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamanka jamhuuriyadda Somaliland.
Waa malain taariikhiya, waxaana loo doortay hab wanaagsan oo qurux badan. Hab dimuqraadiyada.
Waxa muddoo 7 cisho gudahood la dooran doonaa guddoomiye ku xigeenka 1 aad aqalka xildhibaanada Somaliland (Baarlamanka)
Waxa bisha 2 Ogos 207, xilka banneeyey guddoomiyihii hore ee golaha wakiillada jamhuuriyadda Somaliland, mudane, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Ciro) oomuddo 12 sanno ahaa guddoomiyaha baarlamanka Somaliland. Tan iyo intii uu noqday guddoomiyaha xisbiga Waddani, waxaa aad loo dhaleecaynayey, iskuma hayn kartid laba jago. Waa in aad mid uun noqodtaa. Waxa uu isku hayey laba xil, oo kala ah guddoomiyaha aqalka wakiillada iyo guddoomiyaha xisbiga Waddani.
Telefishanka CNN oo Warbixin ku Faaqiday in Maalgashigu Somaliland u Sahlayo inay Kaalin ku Yeelato Siyaasadda Caalamka
2 August, 2017 — somaliland1991
(Hadhwanaagnews) Wednesday, August 02, 2017 07:18:38
DP World waxay maamulaysaa dekedda soddon sannadood, waxaanay shirkadu qorshaynaysaa inay horumarin ku samayso goobaha maraakiibtu
Berbera (HWN)- “Dawladda aan la aqoonsaneyn ee Somaliland, ayaa kasbatay heshiiskii ugu weynaa ee maalgashi shisheeye ah ee ay waligeed hesho. Shirkadda laga leeyahay Dubia ee DP World ayaa gelinaysa $442 Milyan oo doolar marsadda Berbera oo la doonayo in loo beddelo inay noqoto xadunta ganacsiga mandaqadda,” sidaas waxa lagu bilaabay warbixin uu shalay baahiyay Telefishanka caanka ah ee CNN oo fadhigiisu yahay dalka Maraykanka.
Weriye Chris Giles oo ka hawlgala muuq-baahiyaha CNN, ayaa tafaasiil ka bixiyey ahmiyadda uu Somaliland ugu fadhiyo heshiiska casriyaynta dekedda Berbera oo uu tilmaamay inuu kor u qaadayo mustawaha siyaasadeed ee Somaliland ku yeelanayso caalamka, waxaana warkaas soo turjumay oo warbixintan ka diyaariyay Cumar Maxamed
Faarax oo ka tirsan Hadhwanaagnews.
“DP World waxay maamulaysaa dekedda soddon sannadood, waxaanay shirkadu qorshaynaysaa inay horumarin ku samayso goobaha maraakiibtu ku xidhato iyo aagga ganacsiga xorta ah.
Dawladda Somaliland waxay naawilaysaa in dekeddu u adeegto ganacsiga bariga Afrika oo intiisa badani marto dekedda Jabuuti. Waxa kaloo mashruucani horumarin doonaa dhaqaalaha Somaliland.
Somaliland waxay shaacisay madax-bannaanideeda 1991, oo ay ka go’day dalka dagaaladu dishoodeen ee Soomaaliya. Waxay hirgalisay nabadgelyo cago-adag ku taagan, waxa kaloo ay qabsatay doorashooyin xor ah, haseyeeshee ma jiro waddan kaliya oo ictiraafay qaranimadeeda. Beesha caalamku waxay mudnaanta siinaysaa in Soomaaliya noqoto dal qudha oo middaysan.
Heshiiska DP World waxa uu tusmaynayaa awooda dalku ku yeelanayo adduunka. Maalgashigani waxa uu ku soo beegmay iyadoo dhallinyarada Somaliland ay saamaysay shaqo la’aanta oo gaadhay in ka badan Boqolkiiba Lixdan (60%) iyo abaartii ugu xumayd sannado oo saamaysay 1.5 Milyan oo qof oo tirada dadka ku nool Somaliland ka noqonaysa 30%.
Agaasimaha ururka dhaqanka ee Red Sea Cultural Association ee caasimada Hargeysa, Jaamac Muuse Jaamac, ayaa aaminsan in Mashruucaasi uu abuuri doono fursado.
“Dekedda Berbera waa mid aad muhiim ama xudun ugu ah Somaliland,”ayuu Jaamac u sheegay CNN, waxaannu intaas ku daray; “Maalgashigani wuxuu xoojinayaa isku-xidhka Afrika, gaar ahaan Itoobiya, waa xilli hore haddii aan idhaahdo dhammaantii maalgashigani wuu wanaagsan yahay, laakiin waxaan ku kalsoonahay inay tahay tallaabo hore loo qaaday.”
“Geeska Afrika waa gobol aad u koraya,waxaana ka jira qaar ka mid ah dhaqaalaha degdeg u korista badan ee adduunka,” ayuu yidhi Guddoomiyaha shirkadda DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, waxaannu yidhi; “DP World waxay dhisaysaa kobaca gobolka (Geeska Afrika) si aanu u sahalno ganacsiga.”
Goobta ay ku taalo dekeddu waxay fursad siinaysaa dalka aan badda lahayn ee Itoobiya oo ku xidhan waddanka jaarkiisa ah ee Jabuuti oo ay kala soo degaan ganacsigooda Boqolkiiba Sagaashan 90%. Itoobiya waxay xilligan dekedda Berbera kala soo degtaa raashin cadadkiisu xaddidan yahay, waxase ballaadhinta lagu samaynayo marsaddu ay keenaysaa in Itoobiya kordhiso baddeecadaha u soo mara Berbera.
Dawladda Somaliland waxay sheegtay in heshiiska dekedda ay Itoobiya ka siinayso saami ah boqolkiiba Sagaal iyo Toban 19% oo u keeni doona faa’iido labada dhinac ah.
Somaliland waxay heli doontaa saaxiib ay garabsato oo awood leh, Itoobiya waxay ka mid tahay dalalka dhaqaalahoodu horusocodka samaynayo ee Afrika, waana waddanka martigeliyey(Xaruntiisu ku taal) Midowga Afrika isla markaana cudud weyn ku leh diblomaasiyada caalamka.
Labaatameeye sannadood ka dib, waxa dalkan aan la aqoonsani uu hawaysanayaa inuu kaalin ku yeesho masraxa caalamka.
Somaliland secures record $442m foreign investment deal By Chris Giles, CNN
Weriye Chris Giles oo ka hawlgala muuq-baahiyaha CNN, ayaa tafaasiil ka bixiyey ahmiyadda uu Somaliland ugu fadhiyo heshiiska casriyaynta dekedda Berbera oo uu tilmaamay inuu kor u qaadayo mustawaha siyaasadeed ee Somaliland ku yeelanayso caalamka, waxaana warkaas soo turjumay oo warbixintan ka diyaariyayCumar Maxamed
Faarax oo ka tirsan Hadhwanaagnews.“DP World waxay maamulaysaa dekedda soddon sannadood, waxaanay shirkadu qorshaynaysaa inay horumarin ku samayso goobaha maraakiibtu ku xidhato iyo aagga ganacsiga xorta ah.